အကောင်းဆုံး Citicoline ဆိုဒီယမ် (33818-15-4) ထုတ်လုပ်သူ - Cofttek
Cofttek သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံး Citicoline Sodium (CDP Choline Sodium) အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင် ၂၂၀ ကီလိုဂရမ်၏လစဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်ပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (ISO9001 & ISO14001) ရှိသည်။
Citicoline ဆိုဒီယမ် (CDP Choline Sodium)(33818-15-4) Specifications
အမည်: Citicoline ဆိုဒီယမ် (CDP Choline Sodium)
မော်လီကျူးအလေးချိန်: 510.308 ဂရမ် / mol
ပွိုင့်အရည်ပျော်: > 240 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ဓာတုအမည်: Citicoline ဆိုဒီယမ်; cdp-choline ဆိုဒီယမ်
နာမ်: Sodium [[(2S,3R,4S,5S)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
InChI Key ကို: YWAFNFGRBBBSPD-KDVMHAGBSA-M
ဘဝတစ်ဝက်: နာရီ ၁၂၀
ပျော်ဝင်: DMSO, ရေ (အနည်းငယ်) တွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။
သိုလှောင်မှုအခြေအနေ: ခြောက်သွေ့သော၊ မှောင်မိုက်သောကာလနှင့် ၀ မှ ၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် (ရက်သတ္တပတ်များမှရက်သတ္တပတ်များ) သို့မဟုတ်နှစ်ရှည်လများ (၂၀ လမှနှစ်) အထိ -0 C တွင်ရှိသည်။
လျှောက်လွှာ: Citicoline ဆိုဒီယမ်သည် neuroprotective agent နှင့် dietary supplement တစ်ခုဖြစ်သည်
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: White ကအစိုင်အခဲအမှုန့်
Citicoline ဆိုဒီယမ် (33818-15-4) NMR Spectrum
ဘာဖြစ်သလဲ Citicoline ဆိုဒီယမ် (CDP Choline Sodium)(33818-15-4) ?
Citicoline ဆိုဒီယမ် (CDP-choline Sodium, cytidine 5'-diphosphocholine) အမှုန့်သည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသောအာဟာရဖြစ်ပြီး ဦး နှောက်အတွင်းရှိ choline နှင့် cytidine နှစ်ခုလုံးအတွက်ရှေ့ပြေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် uridine သို့ပြောင်းသည်။ လူသားများအတွက် Citicoline Sodium သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရဓာတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအာရုံကြောပြွန်၏ချို့ယွင်းချက်များ၊ အသည်းရောဂါနှင့်အခြားရောဂါဗေဒများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ CDP-choline ဆိုဒီယမ်သည် (choline ပါ ၀ င်သော) phospholipids သုံးမျိုးထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးနှုတ်အားဖြင့်ဖြည့်စွက်နိုင်သည် (အခြားနှစ်ခုမှာ alpha-GPC နှင့် phosphatidylcholine) ။
Citicoline ဆိုဒီယမ် (CDP Choline Sodium)(33818-15-4) အကျိုးခံစားခွင့်
CDP-choline သည်အာရုံခံအမြှေးပါးများရှိဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ phospholipids များ၏ဇီဝပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်စီအက်စ်ပီ (choline) သည် CNS တွင် noradrenaline နှင့် dopamine ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းစမ်းသပ်မှုအရသက်သေပြခဲ့သည်။
ဤသည်ဖြည့်စွက်မှုကြောင့်ကပေးအပ်သည့်မော်လီကျူး၏နှစ်ဦးစလုံးအာရုံကြောဖြစ်ကြပြီးအလားအလာသင်ယူမှုမြှင့်တင်ရန်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှအိုမင်းနှင့်ဆက်စပ်မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းမှုကိုကာကွယ်တားဆီးရန်သို့မဟုတ်ကုသဆီသို့ဆင်ယင်နေသည်။ ဒီအခန်းကဏ္ဍမှာ phosphatidylcholine ကို (PC) ထက် ပို. ထိရောက်သောဖြစ်ပေါ်လာသောနေစဉ်, လည်းဦးနှောက်ထဲမှာ PC ကိုပေါင်းစပ်တိုးပွားလာမှုကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်၎င်း၏အာနိသင် Alpha-GPC ၏ရန်အတန်ငယ်နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
Citicoline ဆိုဒီယမ် (CDP Choline Sodium)(33818-15-4) အသုံးပြုမှု
CDP-choline သည်သိကျွမ်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ အခြားအလားအလာရှိသောအသုံးပြုမှုများရှိသည်။ ၎င်းကိုငယ်ရွယ်စဉ်ကမှတ်ဥာဏ်တိုးမြှင့်ပေးသည့်အရာအဖြစ်သုံးလေ့ရှိသော်လည်းပါးစပ် CDP-choline ဖြင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ဟုကြွက်မှေးမှိန်လေ့လာမှုများအရလူငယ်တွင်လူ့လေ့လာမှုကိုယခုအချိန်တွင်မရှိသေးပါ။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ CDP-choline (ပုံတူကူးယူရန်လိုသည့်) နည်းသောဆေးပမာဏနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွားလာကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ CDP-choline သည်ကိုကင်းနှင့်ကိုကိုးနှစ်မျိုးလုံးကိုစွဲလမ်းစေသည့်ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးအဖြစ် (ပဏာမသက်သေအထောက်အထားများအရ) ကိုပါတားဆီးနိုင်သည်။
Citicoline ဆိုဒီယမ် (CDP Choline Sodium)(33818-15-4) လြှောကျလှာ
Citicoline ဆိုဒီယမ် (CDP Choline Sodium) အမှုန့်သည် neuroprotective agent ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆယ်လူလာဆက်သွယ်ရေးကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ SAM ၏ပေါင်းစပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ဂလူးကို့စ်၏ဇီဝြဖစ်တိုးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Citicoline ဆိုဒီယမ် (CDP Choline Sodium) အမှုန့်သည်သဘာဝတွင်တွေ့ရသောဘေ့။ lecitin biosynthesis ၏အဓိကလမ်းကြောင်းအတွက်အလယ်အလတ်။ အာရုံကြော။ ၎င်းသည်သွေးအားနည်းရောဂါနှင့် ဦး ခေါင်းဒဏ်ရာကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ Neuroprotectiveproduct ။ ဦး နှောက်အကျိတ်ရောဂါ၊ ဦး နှောက်ဒဏ်ရာနှင့်မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းမှုများတွင် Citicholine သည်အကာအကွယ်သက်ရောက်မှုများကိုပြသသည်။ AchEIs (Acetylcholinesterase inhibitor) နှင့်အတူပေးသောအခါမကြာသေးမီကစိတ်ဖောက်ပြန်ဆန့်ကျင်ထိရောက်မှုပြသခဲ့သည်။ ကြွက်များတွင် 150mg / kg တစ်ထိုးဖြင့် Neuroprotective, acnticonvulsant လုပ်ဆောင်မှုနှင့်သက်သာစေနိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသရုပ်ဖော်သည်။ ကြွက်များတွင်လူမီနီယမ်ကိုသိမြင်မှုအားနည်းခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
Citicoline ဆိုဒီယမ် (CDP Choline Sodium)(33818-15-4) အမှုန့် ရောင်းမည်
(Citicoline ဆိုဒီယမ်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ဝယ်ယူရမည်နည်း (CDP Choline Sodium)(33818-15-4) အမှုန့်အမြောက်အများ)
ကျွန်တော်တို့ဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက်ပါ Citicoline ဆိုဒီယမ် (CDP Choline Sodium)(33818-15-4) ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ် ၀ န်းစားသုံးမှုအတွက်လုံခြုံမှုရှိစေရန်သေချာစွာ၊ လွတ်လပ်သောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်သည်။
 Tyurenkov IN, Kurkin DV, Bakulin DA, Volotova EV, Chafeev MA ။ [metformin, gosogliptin, citicoline နှင့် GPR119 ဝတ္ထု agonist တို့၏ Cerebroprotective လုပ်ဆောင်မှုသည်ဆီးချိုရောဂါစမ်းသပ်မှုအောက်တွင်] ။ Zh Nevrol Psikhiatr Im အက်စ်အက်စ် Korsakova ။ 2017; 117 (12 Vyp 2. ။ ): 53-59 ။ Doi: 10.17116 / jnevro201711712253-59 ။ ရုရှား PubMed PMID: 29411746 ။
 Jiang JJ၊ Xie YM၊ Zhang Y, Zhang YK, Wang ZM, Han B. [မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ဦး နှောက်အားနည်းချက်ကိုလေ့လာခြင်းကုသမှုတွင် Shuxuening ဆေးထိုးဆေး၏လက္ခဏာများ] Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2016 ဒီဇင်ဘာလ; 41 (24): 4516-4520 ။ Doi: 10.4268 / cjcmm20162407 ။ တရုတ်။ PubMed PMID: 28936832 ။
 Liu Y, Wang J, Xu C, Chen Y, Yang J, Liu D, Niu H, Jiang Y, Yang S, Ying H. ATP အလှူရှင် module တစ်ခုမှမောင်းနှင်သော Multiple enzyme-catalyzed CDP-choline ထုတ်လုပ်မှု။ Appl Microbiol ဇီဝနည်းပညာ။ 2017 ဖေဖော်ဝါရီ; 101 (4): 1409-1417 ။ Doi: 10.1007 / s00253-016-7874-0 ။ Epub 2016 အောက်တိုဘာ 13. PubMed PMID: 27738720 ။
 Giménez R, Raïch J, Aguilar J (နိုဝင်ဘာ ၁၉၉၁) ။ "အိုမင်းကြွက်များ၏နာတာရှည် CDP-choline ကုသမှုကသွေးဆောင် ဦး နှောက် striatum dopamine နှင့် acetylcholine receptors အတွက်အပြောင်းအလဲများ" ။ ဆေးဝါးဗေဒ၏ဗြိတိသျှဂျာနယ်။ 1991 (104): 3-575 ။ Doi: 8 / j.1111-1476.tb5381.1991.x ။ PMC12471. PMID1839138.
 Tardner, P. (2020-08-30) ။ "သိပ္ပံနည်းကျကျဆင်းမှုနှင့်သိမြင်မှုချို့ယွင်းမှုများကိုကုသရာတွင် citicoline ကိုအသုံးပြုခြင်း။ ဆေးဝါးဆိုင်ရာစာပေ၏ meta-analysis သည်•ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာနိုင်ငံတကာဂျာနယ်" ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာနိုင်ငံတကာဂျာနယ်။ 2020-08-31 ရယူရန်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate အမှုန့် (778571-57-6)